रमेश पौडेलको आभासित आलाप भित्र - राजेश राई - [2008-05-17]
कला, साहित्य, संगीत र सञ्चारबाट कोही पनि टाढा रहन सक्दैन। युग यहाँ निरसम्म आईपुग्दा यी चारवटा चिजहरु प्रत्येक जीवनको एक अभिन्न पाटो वनिसकेका छन्। जो यी चिजहरुबाट बेखबर रहन्छ वास्तवमा ती मान्छेहरु साँचो जीवनबाट पनि बेखबर हुन्छन्। तर सत्य यो हो की युगको दैलामा यहाँनिर आईपुग्दा मान्छेहरु जीवनबाट बेखबर छैनन्।
पलपलमा मान्छेहरु नयाँ जीवन बाच्न खोजिरहेका हुन्छन्। कला, साहित्य, संगीत र सञ्चार यिनै माध्यमहरुको बलमा मान्छेहरु जीवनको अर्थ र रङ्ग खोजिरहेका हुन्छन्। जो मान्छेहरु आफ्नो जीवनबाट बेखबर छैन ती मान्छेहरुलाई कला, साहित्य, संगीत र सञ्चार जीवन झैं प्रिय लाग्छ। यी चीजहरु प्रिय लाग्ने जो कोहीलाई पनि सायद रमेश पौडेल पनि प्रिय लागेको हुनुपर्छ। किनभने रमेश पौडेल कला, साहित्य, संगीत र सञ्चारको एउटा सुन्दर नाम हो जसले यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीवनलाई खर्चेर एउटा सुन्दर इतिहास वनाएको छ र वनाउने क्रममा छ। यो क्षेत्रको युवापुस्ताको शक्तिशाली र प्रिय नाम हो रमेश पौडेल।
सुन्दर जीवन र जगतको रङ्ग पोखेर सबैको प्रिय वनेका चित्रकार रमेश पौडेल, कविताहरुमा जीवनका सुन्दर बिम्बहरु कोरेर सबैलाई जीवन बाच्नुको अर्थ खोज्न अभिप्रेरित गर्न शक्तिशाली कवि रमेश पौडेल, सुन्दर गीत मार्फत सबैको मनको संघारमा थाहै नपाई टेक्ने गीतकार रमेश पौडेल, रेडियो नेपाल मार्फत सबैको मनभित्र डेरा जमाउन सफल कार्यक्रम सञ्चालक रमेश पौडेल। उनको परिचय यही हो। बि.सं. २०२२ सालमा तनहूंमा जन्मिएका पौडेल हाल रेडियो नेपालमा कार्यरत छन्। साहित्य संसार, विम्ब प्रतिविम्ब जस्ता लोकप्रिय साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पौडेल एउटा राम्रा कवि हुन्, सफल चित्रकार अझ त्यो भन्दा बढी गितकार हुन्। दर्जनौ पुस्तकहरुमा आवरण चित्र वनाएका छन् उनले। बहुआयमिक व्यक्तित्व र परिचय भएका पौडेलको पछिल्लो नयाँ परिचय हो गीत संग्रह आभासित आलाप दुई दशक अघिदेखि नै गीत लेखेर आम श्रोताहरुको मन जितेर गाउँघरको उकाली ओरालीमा, सहरको वजारको चोकहरुमा सबैको गोठहरुले सुनिरहने, सबैको ओठहरुले गुनगुनाई रहने सुन्दर गीतहरुको संग्रह हो आभासित आलाप । यो संग्रहभित्रको गीतहरु सबैको प्रिय वनि सकेका चर्चित गीतहरु नै हुन्। ८१ वटा गीतहरु मध्येका अधिकांश गीतहरु सबैको प्रिय वनिसेकेका गीतहरु हुन्। ती प्रिय गीतहरु मध्ये एउटा गीत हो.
के वर मागी फर्क्यौ भन तिम्ले पुज्ने देउता सित
दुनियालाई नभने नि भन्न हुन्छ एउटा सित.
ढेड दशकअघि नै यि गीत लेखेका हुन् उनले। ढेड दशकअघि नै यति सुन्दर गीत लख्ने गीतकार रमेशका अन्य गीतहरु पनि उतिकै सुन्दर छन्। रमेश पौडेलले कुनै गीतमा दुखको समुन्द्रमा पौडिदै गामबेसीका उकाली ओराली गर्नहरुको पीडा कोरेका छन् त कुनै गीतहरुमा सहरका गल्ली र गचेल्डाहरुमा भौतारिदै जीवनको खोजि गरिरहने दुख लेखेका छन्। कुनै गीत मार्फत उनी गामबेसीका मेलापातहरुमा पर्म खेल्न पुगेका छन् त कहिले पागल प्रेमी भएर प्रेमिकाको शरणमा पुगेका छन्। उनी प्रेमका गीतहरुमा मात्र अल्भिmएका छनैन्। गरिव जनताहरुले पाएको उत्पिडन भोका नाङ्गा जनताहरुले बेहोरेका दुख पीडाप्रति पनि उतिकै सचेत छन्। उनले सचेतताका साथ गरिव जनताहरुको पीडा, आक्रोश र संवेदनालाई पनि समेटेका छन्। उनले कुनै वाद र आस्था भन्दामाथि उठेर आम मान्छेहरुको संवेदना, प्रेम पीडा र आक्रोशलाई गीतमा समेटेका छन्। उनको कुनै गीत प्रेमी प्रेमिकाको साहारा वनेको छ कुनै गीत गामबेंसीको आवाज वनेको छ कुनै गीत देशभक्तिको आवाज वनेको छ त कहिले गरिव जनताहरुको पीडा र आक्रोश वनेको छ। कुनै गीत क्रान्तिको लागि वनेको छ त कुनै शान्तिको लागि। यहाँ निर आईपुग्दा यसो भनौ उनी सबैको गीतकार हुन् `आभासित आलाप\_' गीत सग्रह सबैको आवाज समेटिएको गीति संग्रह हो।
रमेश पौडेल सबैका प्रिय हुन् उनका सृजनाहरु सबैको प्रिय वनेका छन् उनको लोभलाग्दो र उज्यालो भविष्यको सुदूर यात्रा जारी रहोस्। सबैको प्रिय रमेशको प्रियताको उचाई सधै माथि चढुन् कहिल्यै फेदी नझरुन् मेरो सदिच्छा।
राजेश राई, धनकुटा
It is very good to know about Ramesh Dai. Rajesh jee you done very great job